Puntland Yey Dulmane u tahay ? | Puntland Today
Posted on November 3, 2016 by Dal Joog	Intaan su’aashan jawaabteeda uguda galin aan wax yar ku nasto oo tooshka la dul tago hordhac yar oo ku saabsan meesha laga rabay Puntland inay joogto Maanta.
Dowladda Puntland waa 18 sano jir aan joogin meeshii laga rabay Maanta midaas oo ka markhaati kacaysa dib u dhaca ku yimi horumarkii iyo dowladnimo wanaagii la doonayey inay ku talaabsato , balse waxaa meesha ku jirah oon cidna ka qarsoonayn in waxbadan laga qabtay hormarka iyo hanaanka dowladnimada waana sababta keentay inaan ka faaloodo hormar la doonayey in laqabto.
Hogaamiyaal aan shacabka reer puntland soo dooran balse iibsada kursiga waxbadana hagranaya laamihii sharci ahaan la xisaabtami lahaane daboolay .
Dowlad maqaarsaar ah oo xamar fadhigeedu yahay.
Col. Abdulahi Yusuf Axmed (AUH)
Gen. Maxamud Muse Xirsi (Cade Musse)
Dr. Abdirahman maxamed Maxamuud Faroole
Dr.Prof. Abdiwali Maxamed Ali Gaas
Waxaan jirah dib dhac wayn oo xaga baahinta maamulka ah iyo nidaamkii asxaabta badnaa oo asaguna meesha ka maqan midkaas oo runtii fursado badan siinlahaa siyaasiyiin iyo aqoon yahan badan oo dalka iyo dadkaba u adeegi lahaa iyo sidoo kale shacabka oo dooran lahaa hogaanka ay u arkaan inuu ku haboon yahay xafiiska.
Cadaalad daro: waxaa jirta cadaalad daro ay qabaan dadka shacabka ah ee reer puntland anoon ku salaynayn arimo laxiriirah qabiil, cadaalad daradaas waxaa sabab u ah nidaamka dowliga ah ee puntland ka jirah ayaa ah mid aan soo jiidan Karin in qof lagu doorto aqoontiisa, shaqadiisa,kartidiisa, iyo waayo aragnimadiisa waayo nidaamka ayaa ah mid qabili ah oo waa in layska wada dhex arkaa! Waana dulmi haysta aqoon yahan ka mustaqbalka fiican ee shacabka puntland waxaana looga guuri karaa qof iyo cod!.
Gobolo maqan: waxaa jirah gobolo ka maqan gacanta puntland, goboladaas oo shacabkii daganaa ay runtii ka hareen goboladii kale ee puntland xaga hormarka iyo nabadgalyada .
Shacabka puntland waxay dhibaato aan lasoo koobi Karin ku qabaan dowlada xamar fadhigeedu yahay, midaas haba yaraateeh dowlada puntland iyo shacabkeedu aysan ku qabin wax faaido ah, balse 24 ka saac ku haysa dhibaato siyaasi ah iyo mid dagaal toos ahba.
Dhibaatooyinta siyaasiga ah: dowlada puntland iyo shacabkeedu waxay dhexda uxirteen sidii loo helli lahaa dowlad dhexe waxayna riyadaas adag ay qabeen mudo 18sano ah, sabihii loo asaasay puntland ayey ka mid ahayd raadinta qaran somaliyeed, abaalkaas iyo dadaalkaas waxaa dowlada puntlad iyo shacabkeeda loogu badalay hagardaamo siyasadeed .
Waxyaabaha ka markhaanti kacaya waxaa kamid ah. Ugu yaraan 7 heshiis oo wadagaleen puntland iyo dowlada xamar fadhigeedu yahay ay dhamaanba kabaxdo dowladda fedaralk.
Waxaa heshiis yadaas kamid ah: Garowe 1 iyo 2 ,shirkii Galkacayo ,2 heshiis raysalwasaare cumar Cabdirashiid galay dwoalda puntland xiligii xilka yahay Dr. Abdirahman maxamed Maxamuud Faroole iyo hada oo uu hayo Dr.Prof. Abdiwali Maxamed Ali Gaas.
Heshiiskii uu lagay dowladda Puntland raysalwasaare Saacid shirdoon midkaas oo xilkiisi u wayey
Heshiiskii raysulwasaare Abdiwali Sheikh Axmed oo asaguna aakhirkii heshiiskaas eersaday oo xilkisiina ku waayey.
Waxuu madaxwayne Xasan sheikh maxamud marar badan saxaafada kala diriray dowlada iyo shacabka puntlad isagoo ilaaway inay puntland tahay meesha kaliya ee Somalia uu ku lugayn karo isagoon gaari qalilan saarnayn ama Gaal madoobe lasocon.
Waxaana hadaladisa kamidaa “puntland waa 2gobol iyo bar” iyo “Gaalkacayo waa magaalo galmudug”.
Dagaalka tooska ah ee ay dowlada federalku Puntland ku qaaday: waxay dowlada federalku dagaal toos ah ku qaaday magaalada galkacayo oo ciidankii dowladu ay sitoos ah uga qaybqaateen in kabadan 2 jeer kuwaas oo garabsiinaya maamul aan dastuurka federalka waafaqsanayn oo dowladu ka dhistay gobolada dhexe si loogu dhibaateeyo dowlada puntland iyo shacabkeeda.
Shacabka puntland iyo dowladoodu waxay kala garankaraan hagardaamada iyo hormarinta uga imaanaysa xamar waxayna qaadan karaan go aan masiiri ah, uxirnaanta xamar iyo jawaabta ay shacabka iyo dowlada puntland ka helaan xamar waa kaaf iyo kala dheeri!.
Waxay kaloo puntland iyo madaxdoodu garan karaan in shacabka puntland sugi karoh maaweelo iyo riwaayad aan waxba ka soo naaso cadayn .